Usaderedze Chinyakare PR | Martech Zone
Tiri kupa kumusangano wedunhu nhasi uye ndiri kuteerera chirevo chePR. Veruzhinji hukama ane yakarova zvakanyanya mune zvehupfumi, asi maPR masangano ayo akaumba hukama hwakasimba nemidhiya mikuru ari kubudirira. Sangano redu rakabatana nefemu, Dittoe PR, kwerinopfuura gore izvozvi uye takave nemhedzisiro inoshamisa.
Mumwe wevatengi vedu aive nenzvimbo nyowani uye zero masimba pamhepo, asi zvaida kuburitsa yakawanda yekuda. Dittoe PR yakakwanisa kunongedza maindasitiri magazini uye webazines (epamhepo kuburitsa zvitoro) uye kuwana zvinyorwa muzvizhinji zvacho mumwedzi wekutanga. Iko kufukidzwa kwakatibatsira kufambisira mberi yavo yekutsvaga injini chinzvimbo uye yakawedzera kuoneka kwechiratidzo chavo… zvichikonzera kukwirisa-kuburikidza nemitero pane avo akabhadharwa ekushambadzira.
Kuburitswa kwenhau zvakare mukana unoshamisa. Yakasanganiswa ne kutsvaka optimization' Bhenefiti apa yanga isiri nhamba dzakakwira… yaive manhamba akakwirira ane hukama hwakanyanya. Izvo zvinoburitswa zvakaburitswa zvakanangana nevateereri chaivo. Kuburitswa kwenhau kwakatungamira vaverengi kudzokera kune whitepaper uye peji yekumhara uko tarisiro data yakatorwa. Isu tinoshandisa zvakare kuburitswa kwepepanhau pane yemubatanidzwa blog ... saka zviri zvemukati zvakare.
Mukuona kudzoka kwekudyara, mari dzakashandiswa pachinyakare PR dzakave nekudzoka kwakanyanya pakushambadzira investimendi - mukuzivikanwa kwechiratidzo, kusvika kune vanokurudzira, yakananga uye isina kunangana traffic, uye pakupedzisira shanduko.
Tags: prhukama hwevanhuzvetsika prtsika dzehukama neruzhinji
Bounce Rates, Nguva paSiti uye Chiitiko Chekutevera